अनौठो Archives - नेपाली समाचार
सेती अञ्चल अस्पतालमा तिम्ल्याहा बच्चा जन्मिए
तिम्ल्याहा बच्चा धनगढी : डोटीको जोरायल गाउँपालिका ४ कि तारा साउदले तीन छोरीलाई जन्म दिएकी छन् । मंगलबार सेती अञ्चल अस्पतालमा शल्यक्रिया गरी तिम्ल्याहा बच्चा झिकीएको हो । गर्भवती महिलाको डाक्टरहरु खगेन्द्र भट्ट, प्रतिक्षा सिह राठौर, नजमुसब्बा अन्सारी, नारायण पौडेल र कपिल गौतम र बालरोग विषेशज्ञ डाक्टर प्रदीप मिश्र को टीमले शल्यक्रिया गरेका थिए । तीन वटै बच्चा र आमाको स्वास्थ्य राम्रो रहेको चिकित्सकले बताए । बच्चाहरुको नाम स्वास्थ्यकर्मीले जंगा, जमुना र सरस्वती राखिदिएको बाबु…
"सेती अञ्चल अस्पतालमा तिम्ल्याहा बच्चा जन्मिए"
पेन्सनपछि स्कुल पढेका पूर्वलाहुरे, शिक्षक हुँदै बने जनप्रतिनिधिसम्म
झापा (दमक) : दमक-८ का ७६ वर्षीय उद्धवप्रसाद राई आफूले आफैँलाई अनौठो मान्छे ठान्छन्। गोर्खा भर्ती भएर बेलायतको तर्फबाट लडाइँ लडेकाहरु अधिकांश कम्युनिस्टविरुद्ध लडे। उनले पनि १० वर्ष बेलायती सेनाको रुपमा रगत–पसिना बगाए। विभिन्न लडाइँको साक्षी बने। तर, तिनै व्यक्ति अवकाश पछिको जीवनमा भने कम्युनिस्ट मात्र बनेनन्, कम्युनिस्टका तर्फबाट जनप्रतिनिधिमा पनि निर्वाचित भएका छन्। बेलायत स्वशाषित हङकङमा बेलायती फौजमा रहेर काम गर्दा उनले कम्युनिस्टको जीवनशैली नजिकबाट देखे। ‘हङकङ्–चीन सीमा क्षेत्रमा हामी हङकङ्तर्फ बेलायतको तर्फबाट तैनाथ…
"पेन्सनपछि स्कुल पढेका पूर्वलाहुरे, शिक्षक हुँदै बने जनप्रतिनिधिसम्म"
१०० वर्ष कसरी बाँचिन्छ? अनुसन्धाताले पत्ता लगाए यी तथ्य (सबैले हेर्नै पर्ने )
पुस १०, २०७४ एलिस पार्क- यदि तपाईं १०० वर्षसम्म बाँच्नुहुन्छ भने तपाईं विशेष समूहमा पर्नुहुन्छ। वैज्ञानिकहरू यसबारेमा अध्ययन गरिरहेका छन्। तर के यस्ता व्यक्तिहरूमा मुटुको, मधुमेह, हाडजोर्नीको वा कुनै प्रकारका रोग लाग्दैनन्? अथवा उमेरका कारण हुने अन्य कुनै समस्याबाट उनीहरू सुरक्षित हुन्छन्? यस अध्ययनमा सहभागी धेरैजसो विज्ञहरूको निष्कर्ष यो छ कि शताब्दी उमेर बाँच्नेहरूसँग केही ‘एन्टी एजिङ सेक्रेट’ हुन्छ, जसका कारण उनीहरूमा उमेरजन्य समस्याबाट बचाउ गर्छ। अध्ययनका अनुसार शताब्दी बाँच्नेहरूमा धेरै यस्ता जिनहरू हुन्छन्, जसले…
"१०० वर्ष कसरी बाँचिन्छ? अनुसन्धाताले पत्ता लगाए यी तथ्य (सबैले हेर्नै पर्ने )"
रन्तेस (चितवन) — कालिका नगरपालिका(११ स्थित रन्तेस आधारभूत विद्यालयमा ६३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर उनीहरूका लागि बस्न ३ वटा मात्र डेक्सबेन्च छन् । ती डेक्सबेन्चमा साना कक्षामा पढ्ने बालबालिकाले बस्न त परै जाओस्, ठूलाले समेत पालो लगाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । डेक्सबेन्च नहुँदा बालबालिका भुइँमा बसेर पढ्ने गरेका छन् । पहिला यो विद्यालय कल्याण चौरमा थियो । त्यहाँ विद्यार्थी आउन छाडेपछि सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ भन्दै रन्तेसमा सारिएको हो । कल्याण चौरमा पनि…
"डेस्क–बेन्च ३, विद्यार्थी ६३"
श्रीमान् साउदी गएपछि बाध्य भई हलो जोत्न थालेकी खोटाङकी उमाको कथा !!एकचोटी पढनै पर्ने
पुष १० -‘छाेरी मान्छेले गोरु नार्दा कसैले केही भन्ने हुन कि भन्ने लागेको थियो’ खोटाङको दिक्तेल ८ कि उमा विक पहिलो दिन खेत जोत्न जाँदाको अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो ।उहाँलाई जोत्न अप्ठ्यारो लाग्नु स्वभाविक पनि थियो । किनभने गाउँमा त्यो भन्दा अघि कोही महिलाले पनि जोत्ने काम गरेका थिएनन । खेतीपातीमा पुरुषलाई सघाउने काम मात्रै महिलाले गर्थे । उमाको पनि दुई वर्ष अघिसम्मको दैनिकी त यस्तै थियो । श्रीमानलाई खेतीपातीमा सघाउने ।दुई जना दिनभरी जसो नै…
"श्रीमान् साउदी गएपछि बाध्य भई हलो जोत्न थालेकी खोटाङकी उमाको कथा !!एकचोटी पढनै पर्ने"
पुष १०-स्वदेशी देखि बिदेशी सम्मका पर्यटनहरुको रोजाईमा पर्ने चितनको सौराहामा १४ औँ हात्ती महोत्सब भोलीबाट सुरु हुँदैछ । पर्यटनहरुको प्रबद्धन गर्ने उदेश्यल पर्यटकीय नगरि सौराहामा भोली देखि १५ गते सम्म १४ औं चितवन हात्ती महोत्सव आयोजना हुँदैछ । महोत्सवको १४ औं संस्करणको एक भव्य समारोहकाबीच नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने कार्यक्रम तय भएको आयोजकले जनाएको छ । बाजागाजा सहित स्थानिय भेषभुषा सहितको एक दर्जन भन्दा बढि संघसंस्था सहभागी ¥यालीले सौराहा बजार परिक्रममा गरि…
चन्दादातालाई भव्य सम्मान
अचम्म को खबर म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ सिंगामा रहेको धौलागिरि माविका पूर्व विद्यार्थी हाल न्युजिल्याण्डमा कार्यरत लालबहादुर केसीको हजुरआमा गौमसती केसीलाई उक्त विद्यालयमा २५ लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेबापत सम्मान गरिँदै। तस्बिरः कमल खत्री, म्याग्दी, रास
"चन्दादातालाई भव्य सम्मान"
यो माया भन्ने चिज कस्तो हुदो रैछ भने मानिसलाई जे गर्न पनि वाद्य वनाउने रैछ ।नपाए सम्म के हो के हो पाए पछि निकै नै महंगो हुदो रहेछ । माया मानिस अन्धो मात्र होइन पागलसमेत पनि हुदो रहेछ भन्ने कुरा यी राजकुमार तामाङ्गले देखाइदिएको छ । हो यो सत्य तथा घत लाग्दो मायाको कथा यीनै राजकुमारको हो । भिडियो हेर्नुस
"सच्चा प्रेमी !!!जो एक युवतीको प्रेममा पागल भएका करोडपती युबक राजकुमार तामाङ्ग यसरी…"